Fali North: Basseo ဘာသာစကား၊ အသုံးအနှုန်းဝေါဟာရ. ဧဝံဂေလိတန်ဆာပလာများ၊ အသင်းတော်စတင်တည်ထောင်ခြင်း အရင်းအမြစ်များ၊ ခရစ်ယာန်သီချင်းများနှင့် အသံဖြင့်ကျမ်းစာလေ့လာရန် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ. အခမဲ့ MP3 များကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ.
Fali North: Basseo ဘာသာစကား၊ အသုံးအနှုန်းဝေါဟာရ
ဘာသာစကားအမည်/နာမည်: Fali North: Basseo
ISO ဘာသာစကားအမည်: Fali, North [fll]
GRN ဘာသာစကား အမှတ်စဉ်၊ နံပါတ်: 2876
ROD မျိုးနွယ်စုစကား/ဒေသိယစကား ကုဒ်: 02876
ဤအသံသွင်းချက်များသည် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံသမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားမှုအတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ စာအရေးအဖတ်မတတ်သူများ၊ နုတ်ယဉ်ကျေးမှုများသာမက အထူးသဖြင့် လက်လှမ်းမမီသောလူစုများထံ ဧဝံဂေလိတရားကို ပို့ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။
ကယ်တင်ခြင်းနှင့် အခြေခံ ခရစ်ယာန်သွန်သင်ချက်အကြောင်း ရှင်းပြထားသည့် အသံသွင်းထားသော ကျမ်းစာပုံပြင်တိုများနှင့် ဧဝံဂေလိသတင်းစကားများ။ ပရိုဂရမ်တစ်ခုစီသည် ဇာတ်ညွှန်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားပြီး ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုက်ညီသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး သီချင်းများနှင့် တေးဂီတများ ပါဝင်နိုင်သည်။
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် (in Fali, Mayo Oulo)
Fali North: Basseo အတွက် အခြားအမည်များ
Fali North: Basseo ပြောသည့်အရပ်
Fali North: Basseo နှင့်ဆက်စပ်သည့် ဘာသာစကားများ
Fali North: Basseo ပြောသောလူအုပ်စုများ
Fali North: Basseo နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်
ဤဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်၍ GRN နှင့်အတူတကွ အလုပ်လုပ်ပါ
သင်သည် ယေရှုအကြောင်းနှင့် သမ္မာကျမ်းစာသတင်းစကားကို မိမိတို့၏ မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မကြားဖူးသေးသောသူများထံ ဧဝံဂေလိတရားကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုစိတ် ပြင်းပြပါသလား။ သင်သည် ဤဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် ပြောသောသူဖြစ်ပါသလား သို့မဟုတ် မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောသော အခြားသူတစ်ယောက်ကို သင်သိပါသလား။ ဤဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို သုတေသနပြုခြင်း (သို့) ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ကူညီလိုပါသလား သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာသာပြန်ဆိုခြင်း (သို့) အသံသွင်းယူခြင်းပြုလုပ်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကို ရှာဖွေရန် ကူညီလိုပါသလား။ ဤဘာသာစကား (သို့) အခြားဘာသာစကားဖြင့် အသံသွင်းခြင်းကို သင်ကမကထ ပြုလိုပါသလား။ အကယ်၍ ကမကထပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ GRN Language Hotline ကို ဆက်သွယ်ပါ သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
GRN သည် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်များနှင့် ဘာသာစကားကူညီသူများအတွက် မပေးချေကြောင်း သတိပြုပါ။ အကူအညီအားလုံးကို မိမိဆန္ဒအလျောက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။